GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ihe a bụ ebe General Gordon hụrụ na Praslin, Seshel n’afọ 1881 ma sị na ọ bụ ogige Iden
Gịnị na-agbata gị n’uche ma ị nụ banyere Paradaịs? Ọ na-abụ anyị hụ ebe ndị mara mma a kpọrọ “paradaịs” e gosiri n’akwụkwọ ma ọ bụ na tiivi, ya ana-adị anyị ka anyị gaa ebe ndị ahụ kporie ndụ ma chefuo ụwa anyị. Ma, o doro anya na anyị gagodị ebe ndị ahụ kporichaa ndụ lọta, ihe na-ebenụ ka ga na-ebekwa.
Mgbe ọ bụla e kwuru banyere paradaịs, ọ na-atọgbu ndị mmadụ atọgbu. Ma anyị nwere ike ịna-ajụ, sị: Mmadụ ikwere na a ga-enwe “paradaịs” n’ụwa a, ọ̀ bụghị ịmụ anya arọ nrọ? Ọ bụrụ ya, gịnịzi mere obi ji atọ ndị mmadụ ụtọ ma e kwuta okwu ya? À ga-emecha nwee paradaịs n’ụwa a?
AKỤKỌ GBASARA PARADAỊS
Kemgbe ụwa, obi na-atọ ndị mmadụ ụtọ ma ha nụ banyere paradaịs. Ihe mere o ji atọ ọtụtụ ndị ụtọ bụ maka ihe a kọrọ na Baịbụl gbasara ‘ubi Iden nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ.’ Olee ihe mere ubi a ji amasị ọtụtụ ndị? Baịbụl kwuru, sị: “Jehova bụ́ Chineke wee mee ka osisi ọ bụla nke dị mma ile anya, nke dịkwa mma oriri, pupụta n’ala.” Ubi ahụ mara mma n’eziokwu. Ma ihe kacha mee ka ọ maa mma bụ na Chineke “mekwara ka osisi nke ndụ pupụta n’etiti ubi ahụ.”​—⁠Jenesis 2:​8, 9.
Akwụkwọ Jenesis kwukwara na e nwere osimiri anọ si n’ubi ahụ na-asọpụta. A ka ma abụọ n’ime ha ama taa. Otu bụ Osimiri Taịgris (ma ọ bụ Hidekel), nke ọzọ abụrụ Osimiri Yufretis. (Jenesis 2:​10-14) Osimiri abụọ ndị a na-esi n’Ịrak asọba n’Oké Osimiri Peshia. Ebe a na-akpọ Ịrak ugbu a dịbu na Peshia oge ochie.
O doro anya na ndị Peshia ma ihe gbasara paradaịs mbụ ahụ nke ọma. E nwere otu kapet ha mere n’ihe dị ka narị afọ ise gara aga. E sere ubi a gbara ogige nke nwere osisi na okooko osisi ndị mara mma na ya. Kapet a dị n’ebe a na-egosi ihe mgbe ochie na Filadelfịa dị na Pensụlvenịa nke dị n’Amerịka. Okwu ndị Peshia a sụgharịrị “ubi a gbara ogige” pụtakwara “paradaịs.” Ihe e sere na kapet ahụ yiri ihe a kọrọ na Baịbụl gbasara otú ogige Iden si maa mma.
N’ebe dị iche iche n’ụwa, ndị mmadụ na-akọ gbasara paradaịs. Ka ndị mmadụ na-amụba ma na-agbasa n’ụwa, ndị ọ bụla na-akọ gbasara paradaịs mbụ ahụ. Ka oge na-aga, ha bịara gwakọta ya na nkwenkwe ha na akụkọ ifo ndị obodo ha. Taakwa, ndị mmadụ hụ ebe mara mma, ha na-asị na ọ bụ paradaịs.
HA CHỌRỌ ỊMATA EBE PARADAỊS MBỤ AHỤ DỊ
Ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta na-ekwu na ha ahụla ebe paradaịs mbụ ahụ dị. Dị ka ihe atụ, mgbe otu ọchịagha ndị Briten aha ya bụ Charles Gordon gara ileta obodo Seshel n’afọ 1881, ọ hụrụ otu ebe mara mma a na-akpọ Vallée de Mai. Otú ebe ahụ si maa ezigbo mma masịrị ya, ya asị na ọ bụ ogige Iden. Ndị mmadụ na-agazi ebe ahụ elegharị anya. N’afọ 1492, otu onye Ịtali na-akwọ ụgbọ mmiri aha ya bụ Christopher Columbus rutere n’agwaetiti Hispaniola, bụ́ ebe a na-akpọ Dọminikan Ripọblik na Heiti ugbu a. Mgbe ọ hụrụ otú ebe ahụ si maa mma, o chere na ya ahụla ogige Iden ahụ Baịbụl kwuru banyere ya.
Otu akwụkwọ aha ya bụ Mapping Paradise, nwere map oge ochie karịrị otu narị na iri itoolu. E sere ebe Adam na Iv nọ n’Iden n’ọtụtụ n’ime ha. E nwere otu nke pụrụ iche e sere n’ihe dị ka narị afọ asatọ gara aga. E si n’akwụkwọ Beatus onye Liébana dere nweta ya. A bịa n’elu elu map a, e nwere ebe a kabichiri ihe ma see paradaịs n’etiti ya. E gosikwara ebe osimiri anọ si na ya na-asọpụta. A kpọrọ osimiri anọ ndị ahụ “Taịgris,” “Yufretis,” “Indus,” na “Jọdan.” Mmiri ndị ahụ na-asọga n’akụkụ anọ nke ubi ahụ. A sịrị na ọ nọchiri anya otú Ndị Kraịst si gbasaa n’akụkụ anọ nke ụwa. Ihe ndị a na-egosi na n’agbanyeghị na o nweghịzi onye ma ebe Paradaịs mbụ ahụ dị, akụkọ ya ka na-atọ ndị mmadụ ụtọ.
E nwere otu onye Bekee na-ede abụ n’ihe dị ka narị afọ anọ gara aga. Aha ya bụ John Milton. E ji otu abụ o dere aha ya bụ Paradise Lost mara ya nke ọma. O si n’ihe a kọrọ n’akwụkwọ Jenesis banyere otú Adam si mehie na otú e si chụpụ ya n’ogige Iden dee abụ ahụ. N’abụ a, o dere banyere nkwa Chineke kwere ime ka ndị mmadụ dị ndụ ebighị ebi n’ụwa. O kwuru, sị: “Mgbe ahụ ka ụwa niile ga-aghọ paradaịs.” Milton mechakwara dee abụ ọzọ aha ya bụ Paradise Regained.
O doro anya na kemgbe ụwa, ndị mmadụ kwetara na e nwere mgbe paradaịs dị n’ụwa a. Gịnị mere ọtụtụ ndị anaghịzi ekweta na ya taa? Akwụkwọ ahụ bụ́ Mapping Paradise kwuru ihe kpatara ya. O kwuru na “ndị na-akụzi ihe gbasara okpukpe . . . achọghịzi ịma ihe ọ bụla a na-ekwu gbasara ebe paradaịs mbụ ahụ dị.”
A na-akụziri ọtụtụ ndị na-aga chọọchị na ọ bụ n’eluigwe ka ha ga-adị ndụ ebighị ebi, ọ bụghị n’ụwa a mgbe ọ ga-aghọ paradaịs. Ma Baịbụl kwuru n’Abụ Ọma 37:​29, sị: “Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.” Ebe ọ bụ na ụwa abụghị paradaịs ugbu a, è nwere ihe mere anyị ga-eji kwere na Chineke ga-emezu nkwa a? *
ỤWA GA-EMECHA GHỌỌ PARADAỊS
Jehova Chineke, onye mere Paradaịs mbụ ahụ ekwela nkwa na ya ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs. Olee otú ọ ga-esi eme ya? Ì chetara na Jizọs gwara anyị na-ekpe ekpere, sị: “Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe”? (Matiu 6:10) Alaeze ahụ bụ ọchịchị ga-achị ụwa niile. Ọ bụ Jizọs Kraịst ga-abụ eze ya. Ọchịchị a ga-anọchi ọchịchị niile. (Daniel 2:44) Jizọs chịwa, uche Chineke bụ́ na ụwa ga-aghọ paradaịs, ‘ga-eme.’
Tupu Jizọs abịa n’ụwa, Chineke nyere Aịzaya onye amụma mmụọ nsọ, ya ekwuo otú ihe ga-adị mgbe ụwa ga-aghọ Paradaịs. N’oge ahụ, ihe niile na-enye ndị mmadụ nsogbu taa agaghịzi adị. (Aịzaya 11:​6-9; 35:​5-7; 65:​21-23) Gbalịa gụọ amaokwu ndị a na Baịbụl gị. Ọ ga-eme ka obi sikwuo gị ike na Chineke ga-emezu nkwa niile o kwere ndị na-erubere ya isi. Ha ga-ebi na paradaịs, obi ana-atọkwa ha ụtọ. Ha na Chineke ga-adịkwa ná mma. Ọ bụ ihe ọma ndị a ka Adam tụfuru.​—⁠Mkpughe 21:⁠3.
Olee ihe mere obi ji kwesị isi anyị ike na a ga-emecha nwee Paradaịs n’ụwa a? Ọ bụ n’ihi na Baịbụl kwuru, sị: “Eluigwe bụ eluigwe Jehova, ma ụwa ka o nyere ụmụ mmadụ.” Na ụwa ga-aghọ Paradaịs bụ ihe “Chineke, onye na-apụghị ịgha ụgha, kwere nkwa ya tupu mgbe dị anya gara aga.” (Abụ Ọma 115:16; Taịtọs 1:⁠2) N’eziokwu, Baịbụl kwuru na ụmụ mmadụ ga-adị ndụ ebighị ebi na Paradaịs. Ihe a bụ olileanya magburu onwe ya.
^ para. 15 E dekwara ụdị ihe a Baịbụl kwuru na Koran. Na sura 21, amaokwu 105 Al-Anbiya’ [Ya bụ, Ndị Amụma] kwuru, sị: “Ndị ezi omume n’etiti ndị ohu M ga-eketa ụwa.”